चीनमा कोरोना भाइरसबाट ३६१ जनाको मृत्यु - Nepali News Nepal
चीनमा कोरोना भाइरसबाट ३६१ जनाको मृत्यु
फ्रेवुअरी 3, 2020 फ्रेवुअरी 3, 2020 Bishwaghatana0Comments २१३ जनाको मृत्यु, कोरोना भाइरस, कोरोना भाइरसका लक्षण, कोरोना भाइरसको उपचारका लागि अस्पताल, चीन, चीनमा कोरोना भाइरसबाट २१३ जनाको मृत्यु
२० माघ २०७६ चिन: नोवेल कोरोना भाइरसले महामारीको रुप लिँदै गएको छ । चीनमा यसबाट अहिलेसम्म ३६१ को मृत्यु भइसकेको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण भएका बिरामीको उपचारका लागि सातामा एक हजार शैयाको अस्पताल चीनले निर्माण गरेको छ ।
८ दिनमा निर्माण सम्पन्न भएको अस्पताललाई सुविधा सम्पन्न बनाइएको चीनका अधिकारीले बताएका छन् । यस्तै १३ सय शैयाको अर्को अस्पताल पनि द्रूत गतिमा निर्माण भइरहेको छ । गएको डिसेम्बरमा हुबेइ प्रान्तको वुहानमा देखिएको नोवेल कोरोना भइरसको संक्रमण अहिले चीनसहित विश्वका विभिन्न देशमा फैलिएको छ ।
कोरोनाबाट चीनमा मात्रै १७ हजार भन्दा बढी मानिसमा संक्रमण पुष्टि भएको छ । चीन बाहिर नेपालसहितका देशमा गरी १५० जना भन्दा बढी संक्रमित भएका छन् । यस्तै आइतबार पहिलो पटक चीन बाहिर एकजनाको मृत्यु भएको छ । चीनको वुहानका ४४ वर्षका व्यक्तिको फिलिपिन्समा मृत्यु भएको हो ।
← चीनको दुखमा आफ्नो खुशी खोज्दै अमेरिका !
ए डिभिजन लिग:जावलाखेल युथ क्लबसँग ब्रिगेड बोइज पराजित →
ब्रिटेनका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनलाई कोरोना सङ्क्रमण भएको पुष्टि
विश्वका १५७ देशमा फैलियो कोरोना (कहाँ कतिको मृत्यु ?)
मार्च 16, 2020 मार्च 19, 2020 Bishwa Ghatana 0
के नेपालमा यति थोरै मात्र छन त कोरोना संक्रमित ?